Kedu ka ndị na-ehicha agụụ si arụ ọrụ?
The umeala agụụ hichaa bụ otu n'ime handiest ụlọ ihicha ụlọ eji taa. Simpledị ya dị mfe ma dị irè ejirila aka iji kpochapụ ájá na obere ihe ndị ọzọ dị ọcha, wee gbanwee nhicha ụlọ ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa. N'iji ihe ọ bụla ma ọ bụ mmiri eme ihe, agụụ ahụ na-ehichapụ unyi ma na-echekwa ya maka mkpofu.
Yabụ kedu ka ndị dike ụlọ a si arụ ọrụ?
Mmetụta na-adịghị mma
Simplezọ kachasị mfe iji kọwaa etu onye na-ehichapu ihe nwere ike isi nuchaa irighiri ihe bụ iche ya dịka ahịhịa. Mgbe ị na-a aụ ihe ọ drinkụ drinkụ site na ahịhịa, ihe ị ofụ a createsụ na-emepụta nrụgide ikuku na-adịghị mma n'ime ahịhịa ahụ: nsogbu nke dị ala karịa nke ikuku gbara ya gburugburu. Dị ka ihe nkiri vidio, ebe mmebi nke oghere ụgbọ mmiri na-amịrị ndị mmadụ n'ime mbara igwe, onye na-ehicha agụụ na-emepụta nrụgide na-adịghị mma n'ime, nke na-eme ka ikuku na-asọba n'ime ya.
Onye na-ehichapu ọkụ na-eji igwe eletrik nke na-agbanye fan, na-ackingụ ikuku - na obere ihe ọ bụla jidere na ya - na ịkwanye ya n'akụkụ nke ọzọ, n'ime akpa ma ọ bụ tragaasi, iji mepụta nrụgide na-adịghị mma. I nwere ike iche na mgbe sekọnd ole na ole ọ ga-akwụsị ịrụ ọrụ, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịmanye ikuku dị ukwuu n'ime oghere. Iji dozie nke a, agụụ ahụ nwere ọdụ ụgbọ mmiri na-eme ka ikuku pụọ n'akụkụ nke ọzọ, na-ekwe ka moto ahụ nọgide na-arụ ọrụ ọfụma.
Ikuku, agbanyeghị, ọ naghị agafe ma wepu ya n'akụkụ nke ọzọ. Ọ ga-abụ ihe na-emerụ ahụ ndị mmadụ na-eji agụụ. N'ihi gịnị? Ọ dị mma, n’elu unyi na uzuzu nke agụụ na-ewere, ọ na-achịkọtakwa ezigbo ọmarịcha ihe anya anaghị ahụ n’anya. Ọ bụrụ na anabatacha ha nke ukwuu, ha nwere ike imebi akpa ume. Ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe niile ndị a na-tọrọ atọ site na akpa ma ọ bụ tragaasi, agụụ hichaa gafere ikuku site na ọ dịkarịa ala otu ezi nyo na mgbe a HEPA (High arụmọrụ akpan akpan njide) nyo wepụ fọrọ nke nta niile nke ájá. Naanị ugbu a ka ikuku ga-eku ume ọzọ.
A na-ekpebisi ike nke onye na-ehicha agụụ ọ bụghị naanị site n'ike nke moto ya, kamakwa oke ọdụ ụgbọ mmiri, akụkụ nke na-amị unyi. Obere nrịgo nke ihe oriri ahụ, a na-ewepụtakwu ike ịmịkọrọ ihe, dị ka ịpị otu ikuku site na ụzọ dị warara pụtara na ikuku ga-agagharị ngwa ngwa. Nke a bụ ihe kpatara na mgbakwụnye ihe nhicha na oghere dị warara, obere ọdụ ụgbọ mmiri dị ka nke nwere nnukwu mmị karịa nke ka ukwuu.
Enwere ụdị dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche, ma ha niile na-arụ ọrụ n'otu ụkpụrụ nke ịmepụta nrụgide na-adịghị mma site na iji fan, na-amata unyi na-ackedụ, na-ehichapụ ikuku na-ekpochapu ma hapụzie ya. Worldwa gaara abụ ebe ruru unyi karịa ha.